साहित्यपोस्ट | हाम्रा प्रकाशन
आमाको काखमा दुखेको देश
डा. वीरेन्द्र केसी
न्युजिल्यान्डमा सिंचाई विज्ञका रुपमा कार्यरत डा. वीरेन्द्र केसी स्कुले जीवनबाट नै काव्यप्रति आकर्षित हुनुहुन्थ्यो । महेन्द्र मावि तुल्सीपुर, दाङमा अध्ययनरत छँदा तत्कालीन प्रधानाध्यापक विष्णुप्रसाद शर्माको उत्प्रेरणापछि काव्य लेखनमा लम्कनु भएका डा. केसीको ‘आमाको काखमा दुखेको देश’ प्रथम कृति हो ।
परदेशमा हुँदा हरेक सच्चा सपुत हुरुक्क हुने गरी देशप्रेममा पर्ने गर्छन् । यो काव्यकृतिको विशेषता पनि डा. केसीको देशप्रेम नै हो । यस कृतिमा छन्द र मुक्तछन्द गरी दुई किसिमका कविताहरु छन् । छन्द कविताभित्र पनि अकेन उपविधामा उहाँले कलम चलाउनु भएको छ । मुक्त छन्दका ५५ र छन्दबद्ध कविता २५ गरी जम्मा ८० वटा कविताहरु यसमा सङ्ग्रहित छन् । पाठकहरुले कवि डा. केसीको देशप्रेम, नारीमुक्ति र राजनीतिप्रतिको वितृष्णामाथि कोरिएका शब्दहरुलाई च्वास्स घोच्ने पाउने छन् भने छन्दबद्ध कविताहरुमध्ये महाभारतमाथि लेखिएको लामो कवितालाई विशेष रुचिकर मानी पाठ गर्नेछन् । यसका अतिरिक्त बालबालिकालाई वाचन गर्न सहयोग पु¥याउने किसिमका कविताहरु पनि छन् ।
यो कविता सङ्ग्रह खरिद गर्न साहित्यपोस्टको नं. ९८४९०७०५७१ मा फोन गरी काठमाडौँ उपत्यकामा घरैमा मगाउन सकिनेछ भने यहाँ क्लिक गरी देशका विभिन्न स्थान तथा विदेशमा अर्डर गर्न सकिनेछ ।
यस सङ्ग्रहका बारेमा कसले के भनेः
डा.प्रा. सुधन पौडेल
सहज अभिव्यक्तिको प्रशंसनीय उदाहरण
नेपालको सल्यान जिल्लामा जन्मनु भएका पूर्ण ओली पेशाले सरकारी कर्मचारी हुनुहुन्छ । यसअघि उहाँ नेपालको पश्चिमी भेगका कयौँ शिक्षालयहरुमा शिक्षक तथा प्रधानअध्यापकका रुपमा सेवा गरिसक्नु भएको छ । लेखन उहाँका प्रमुख व्यसन हो ।
यालमाया कथाकार पूर्ण ओलीको सर्वोत्कृष्ट कथाकृति हो । यसमा मानव संवेदना, मनोवेग तथा प्रेमका विविध आयाम र प्रसङ्ग पस्कनु भएको छ । उहाँले एउटा सन्तानप्रति आमाको समर्पण, युवाप्रेमका अनेक उद्वेलन तथा ईष्र्याका अतिरिक्त अपराधबोधलाई यस कथामार्फत पस्कनु भएको छ । लेखक ओलीको यो दोस्रो प्रकाशित कृति भए पनि उहाँको लेखनी पक्ष निकै सशक्त देखिन्छ ।
यस कथाकृतिमा १५ वटा लामा कथाहरु पस्कनु भएको छ ।
कृतिका बारेमा कसले के भने ?
मोहन दाइ र यालमाया
कथाकारका आफ्नै दुःख र दर्दलाई कथामा पढ्दा आँखा ओभाना भएनन्
जीवन नदीको किनारै किनार
नेपालको गोर्खा जिल्लाको ताकुमा जन्मनु भएकी कृतिकार नमिता दवाडीले बालापनमा आमाका मुखारबिन्दबाट वाचन हुने अनेकन् काव्यरसले अभिभूत हुने अवसर पाउनु भयो । पछि स्कुल र क्याम्पसमा छँदा उहाँले कविता लेखनलाई तीव्रता दिनुभयो ।
रोजगारीको सिलसिलामा न्युजिल्यान्ड पुग्नु भएपछि कवि दवाडीले लेखनलाई तीव्र बनाउनुभयो । ‘जीवन नदीको किनारै किनार’ उहाँको प्रथम काव्यकृति हो ।
यस कृतिमा ७५ वटा विविध विषयका कविताहरु सङ्ग्रहित छन् । खासगरी नारी जीवनका विविध आयाम, भोगाई तथा देशप्रेम उहाँका प्रिय विषय हुन् ।
समीक्षाः “जीवन नदीको किनारै किनार” र श्री भवानीको इतिश्री
Hasta Gautam ‘Mridul’
Born in Western part of Nepal, Rukum, asadifferently abled Hasta Gautam ‘Mridul’ isafountain of creativity. He has written many books but unpublished.
Now he reside in United States of America. He is active in the field of writing and social service.
Spilled Dreams isacollection of poetry. It has consist of 155 poetry. In this collection, Mr. Gautam has spilled his utmost feeling of his birth country, hosted country and so many things.
Who Said What About It?
किवीको देशमा डाँफेको गुञ्जन
परदेशमा हुँदा हरेक सच्चा सपुत हुरुक्क हुने गरी देशप्रेममा पर्ने गर्छन् । यो काव्यकृतिको विशेषता पनि डा. केसीको देशप्रेम नै हो । यस कृतिमा स्वतन्त्र गजल र लोकछन्दमा आधारित गजल गरी दुई किसिमका गजलहरु समावेश गरिएका छन् ।
यस कृतिमा जम्माजम्मी १३५ गजल समावेश गरिएका छन् । जसमध्ये एक सय वटा स्वतन्त्र गजल उहाँले पस्कनु भएको छ । ती सबै गजलमा देशप्रेम, राजनीतिप्रतिको वितृष्णा र अनेकन् भावहरु पस्कनु भएको छ । त्यस्तै लोकछन्दमा आधारित गजलमा पनि उहाँले झ्याउरे छन्द, सवाई, बालोरी छन्दका गजल पस्कनु भएको छ । अझ उहाँले त ६, ७, १३ र १४ अक्षरबाट निर्मित गजलहरु समेत लेखेर आफ्नो विशिष्ट प्रतिभा देखाउनु भएको छ ।
यस कृतिका बारेमा कसले के भने ?
गीतामा मनका कुरा
(एक मनोचिकित्सकको उद्बोधन)
नेपालको काठमाडौँ उपत्यकाको ललितपुरस्थित धोबिघाट–५ का स्थायी बासिन्दा प्रा.डा. अजय रिसाल २०३५ सालमा जन्मनु भएको हो । उहाँका पिता मधुसूदन रिसाल ‘प्रदीप’ले पनि लामो समय प्राध्यापन गर्नुभएको थियो । मनोचिकित्सामा एमडी गर्नु भएका उहाँ क्लिनिकल मेडिसिनमा विद्यावारिधि हुनुहुन्छ । हाल उहाँ काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेज, धुलिखेल अस्पतालको मनोचिकित्सवा विभागमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।
हिन्दु धर्मावलम्बीहरुको प्रिय ग्रन्थ गीता पाँच हजार वर्षअघि लेखिएको मानिन्छ । यस कृतिमा अर्जुनका लागि श्रीकृणले गरेका मनोवैज्ञानिक उपचार र अहिलेका मानिसका लागि गरिरहिएका मनोवैज्ञानिक उपचारमा कुनै फरक छैन । मान्छे अझै पनि उही प्राचीन मन बोकेर हिँडिरहेको छ र यसको उपचार शैली नयाँ भए पनि पुरानै तरिकाले गर्न सम्भव छ भन्ने कुरा डा. अजय सिरसालले आफ्नो खोजमूलक पुस्तक ‘गीतामा मनका कुरा’ मार्फत् प्रमाणित गर्नुभएको छ ।
कुनै पनि कृतिको सर्वकालीकता त्यसले उजागर गर्ने वर्तमान परिस्थितिमा निहित हुन्छ र, गीता सर्वकालीक कृति हो भन्ने कुरा डा. रिसालले गर्नुभएको यो कोणको अध्ययनले देखाएको छ । हाम्रा प्राचीन धरोहर र सिर्जनाहरुमा गरिने यस्तै अध्ययनले तिनलाई समय सान्दर्भिक बनाउँछन् । तिनलाई अहिलेको आँखाले कसरी हेर्ने भन्ने करा पनि डा. रिसालले यहाँ प्रस्तुत गर्नु भएको छ ।
जसरी गीता जति पटक पढे पनि नयाँ प्रतित हुन्छ, गीतामाथि डा. रिसालले जन्माउनु भएको यो भाष्य त्यस्तै नवीन लाग्छ । युवादेखि वयस्कसम्मका पाठकहरुले यो पुस्तकबाट आफ्नो उेमर र अनुभव अनुसारका नयाँ ज्ञान पाउनु हुनेछ ।